Dayacaadii Dowladda & Da'yartii loo qaadey Dalka Eriterea...!!! (Qormo Dareen xambaarsan) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Kuma soo koobi karo dareenkayga qormo yar ee aan halkaan kusoo gudbiyo oo keliya waxaa i huraya oo i ololaya qalbiga, waxaan la’nahay wiil yaraheena walaalkay Mustafa Aadan Sheekh Cabdi, mudo ku dhow laba sanno.
Walaalkay iga yar Mustafa Aadan Sheekh Cabdi, kuma aanan heynin nolol iyo geeri toona laga soo bilaabo dabayaaqadii sanadkii 2019 kii.Wax kabadan sanad iyo bilooyin kadib oo aan la’ayn walaalkey Mustafe, bishii saddexaad ee sanadkaan ayaa waxaa isoo baaqey telefoon dheer oo ka kooban toban jiifar ama nambar, waana wacay waxa ugu horeeyey ee uu walaalkey igu dhahay waxay ahayd “Aboowe Maxamed waa walaalkaaga Mustafe, waxaan ku suganahay dalka Eriterea oo ay dowladu tababar inoogu qaadey, walaal tababarkii waa inoo dhamaadey mana jirto cid na magac heysa oo na leh waa la idin qaadaa iyo in kale, walaal xaalad adag ayaan ku jirnaa ee Fadlan qur’aan inoo soo akhriya alle meeshaan anagoo nabad hanaga soo wadee…!!!!
Shalay oo ay taariikhdu ahayd 05/06/2021 saacaduna ku beegneyd 11:41 am oo barqanimo waxaa iisoo baaqey telfoon lamid ah midka aan kor kusoo xusey, ilaa xalay habeenkii barkii oo aan wacayey kadib mar qura ayuu ii galey telfoonkii waxaana is haleelnay walaalkey Mustafe oo aan waxbadan iska wareysanay oo ii sheegay in xeradii hore laga soo kaxeeyay lana geeyay xero aad uga fog magaalada.
Waxaa kale oo ii sheegay Mustafe in in kabadan 100 dhalinyaro ah ka baxsadeen xerooyinka kadib markey u dulqaadan waayeen dhibaatada meeshaas ku heysata, wuxuu kaloo ii sheegay in dhalinyartaas qaar badan oo kamid ah la dhaawacay, la diley halka qaar kaloo badan xabsiyada la dhigay.